I-China Induction Draft Cross-flow Towers Yokukhiqiza Amandla, Umkhiqizi Omkhulu Nomhlinzeki Wezinsiza Zezimboni | Yubing
Uhlaka Olwenziwe Lwe-Cross-flow Towers Lokukhiqiza Amandla, I-HVAC Enkulu kanye Nezikhungo Zezimboni
Lolu chungechunge lwemibhoshongo yokupholisa lubangelwa okusalungiswa, imibhoshongo yokuhamba okwehliswayo futhi eyenzelwe ngokuya ngezidingo zamakhasimende ekusebenzeni, ekwakhiweni, ekukhuleni, ekusetshenzisweni kwamandla, ekhanda futha nasezindlekweni ezihlosiwe.
Zikulungele kahle ukusetshenziswa kwezimboni ezisindayo ezitshalweni zamandla, izitshalo zikamanyolo, izakhiwo ze-petrochemical kanye ne-petroleum refineries futhi iningi lemibhoshongo emisha yakhiwe nge-fiberglass evimbela umlilo ngenxa yamandla ayo aphezulu nezici zomlilo / zokugqwala.
Ububanzi obuguquguquka ngokwedlulele uma ubheka isicelo esihlukile sezakhiwo. Umbhoshongo oku-inthanethi ukwakheka okujwayelekile kwezizathu zokusebenza kahle, kepha ukufana okusemgqeni, ukubuyela emuva, nokulungiswa okuyindilinga nakho kuyizinketho lapho uhlelo lwesakhiwo ludinga enye indlela.
Ukucushwa okuyindilinga kungaba yisixazululo esifanele sesayithi elinganiselwe.
Ukwakha umbhoshongo ngendlela eqondile kuhlinzeka ukuhlelwa ngokusetshenziswa kwamandla okuncane, kufaka phakathi ukusetshenziswa kwamandla kagesi okuncishisiwe nekhanda lokuphampa eliphansi kakhulu. Cabanga ngokungena komoya okungena kahle, ukuphakama kombhoshongo nezindleko kuncishisiwe.
Ukulungiselela Ukubuyela Emuva
Ukucushwa kombhoshongo obuyela emuva kungangena ngaphakathi kokulinganiselwa kwesayithi lapho kungenzeki ukwakheka kwe-in-line. Uma kuqhathaniswa nokuhlelwa okuhambisanayo, amandla we-fan nekhanda lokumpompa kukhuphukile okuzoholela ezindlekweni eziphakeme kepha ukusebenza kahle okushisayo okuphansi.
Ukucushwa Okumaphakathi Komugqa
Uma kungenakwenzeka ukuhlela imibhoshongo emugqeni owodwa, kulungile ukuhlukanisa futhi uhlele imibhoshongo ibe ngamayunithi amabili noma ngaphezulu ahlelwe ngokufana kokulungiswa komugqa kucatshangelwa amaphuzu alandelayo:
Izokwehlisa kakhulu ikhanda lokudonsa umbhoshongo ngokuhlukanisa indawo engenayo yomoya phakathi kobuso bombhoshongo obubili.
Kunganciphisa kakhulu izindleko zombhoshongo ezenziwe zaba nokwenzeka ngokuncipha kombhoshongo futhi zathola ukusebenza kahle.
Iyanciphisa amandla we-fan ngokuthola kabusha ukusebenza okulahlekile ngezindawo ezimbili zomoya.
Inciphisa ubude obufakiwe ngokusebenzisa indawo ephakathi kwemibhoshongo yamapayipi emigodi, amapayipi, nezinhlinzeko zokufinyelela.
Umthamo wokushisa othembeke ngokwengeziwe ngokusika umoya udonsela emanzini awayo ngesigamu.
Ukugcinwa okulula nokusebenza okuhleliwe ngokunikeza lesi sikhungo imibhoshongo ehlukaniseka kalula
Langaphambilini Uhlelo lwe-ICE Industrial Water Softener for Cooling Tower Source Water
Olandelayo: Uhlobo Lwebhodlela Olujikelezayo Ukuphikiswa kokuphola Towers
insimu yakha umbhoshongo wokupholisa wezimboni
imboni yokupholisa imboni yokukhiqiza amandla